Kembangan Group of Medical Centres | ကိုလာဂျင်ဇင်ဂို
Collagen ဆိုတာဘာလဲ?။ ဘယ်မှာအသုံးဝင်လဲ?
Collagen ဆိုတာ မျက်နှာအရေပြားနှင့် ခန္ဓာကိုယ် အနှံံ့အပြားတွင် တွေ့ရအများဆုံးဖြစ်ပြီး အသားအရေ နုပျိုတင်းရင်းမှု အတွက် အဓိကထိန်းသိမ်းထားပေးသော ပရိုတိန်းဓာတ်တစ်မျိုး ဖြစ်ပါသည်။
Collagen ဟာ နေ့စဉ် အသက်အရွယ်ရလာသည် နှင့်အမျှ ယိုယွင်းပျက်စီးနေပါတယ်။ Collagen ကို ပိုပြီးပျက်စီးစေနိုင်သော အဓိက အကြောင်းအရင်းများမှာ-
. အချိုဓာတ်များသော အစားအစာများစားသုံးခြင်း
. နေရောင်ခြည်နှင့် အထိအတွေ့များခြင်း စသည်တို့ ဖြစ်ပါသည်။
Collagen ပျက်စီးလာခြင်းကို အဓိက သိသာစေသော အချက်များမှာ-
. မျက်နှာတွင် အရေးအကြောင်းများ ပေါ်လာခြင်း
. အသားအရေ ပျော့တိပျော့တွဲ ဖြစ်လာခြင်း
. အရိုးအဆစ်များ မသန်စွမ်းလာခြင်းတို့ဘဲ ဖြစ်ပါသည်။
Lingzhi ဆိုတာရောဘာလဲ? ဘယ်မှာအသုံးဝင်လဲ?
Lingzhi ဆိုတာကတော့ ရှေးယခင်လက်ထက် ထဲက တန်ဖိုးကြီး ရှားပါးဆေးဖက်ဝင်မှိုတစ်မျိုး အဖြစ် မှီဝဲလျှက်ရှိပြီး စာတမ်းတွေအရ Cancer ရောဂါကို ကာကွယ်နိုင်တဲ့ အာနိသင်ရှိတဲ့အပြင် အမောခံနိုင်ခြင်း၊သက်လုံကောင်းခြင်း၊ ခန္ဓာကိုယ်ခုခံအားစနစ်ကို မြှင့်တင်ပေးခြင်းနှင့် Allergies များကိုသက်သာစေခြင်း စသော အကျိုးအာနိသင်များစွာရှိပါသည်။
အခုလို အကျိုးအာနိသင်ကောင်းတဲ့ Collagen နဲ့ Lingzhi ကိုဘယ်မှာရှာဝယ်လို့ရလဲ?
Collagen Zengo သည် အထက်ပါ အကျိုးအာနိသင်တွေ အားလုံးကို တစ်နေ့တစ်ထုပ်သောက်သုံးရုံနဲ့ရရှိနိုင်ပါတယ်။ World’s First (Collagen + Lingzhi mushroom) Supplement ဖြစ်လို့ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ရောင်းအားအကောင်းဆုံး အားဖြည့်ဆေးအဖြစ် ရပ်တည်နိုင်တာလည်း မဆန်းပါဘူးနော်။ အထုပ်တစ်ထုပ်စီမှာလည်း Switzerland နိုင်ငံ စက်ရုံ မှ ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ ဆာလမွန် ငါးအရေပြားမှ Collagen နှင့် Korea နိုင်ငံမှ Lingzhi မှိုတို့ကိုပေါင်းစပ်ပြီး အမှုန့်ပုံစံဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားတာကြောင့် သောက်ရလည်းလွယ်ကူပါတယ်။ တစ်ဘူးမှာ အထုပ် ၃၀ ပါလို့ တစ်လလုံး သောက်လို့ရပါတယ်။ (၂)ပတ်လောက် သောက်သုံးရုံနဲ့ အသားအရေနုပျိုလာခြင်းနှင့် အရိုးအဆစ်များ ပို၍သန်စွမ်းလာခြင်းတို့ကို သိသိသာသာမြင်တွေ့ခံစား ရမှာဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဘယ်လို သောက်ရမှာလဲ? ဘယ်သူတွေ သောက်သုံးသင့်လဲ?
Collagen Zengo ကို ရေအေးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်၊ ရေနွေးနဲ့ဖြစ်ဖြစ် သောက်လို့ရပါတယ်။ Lingzhi ရဲ့အနံ့၊အရသာတို့ ပါရှိတာကြောင့် လူငယ်တွေအနေနဲ့ ကော်ဖီ၊ လက်ဖက်ရည် တို့နှင့် တွဲသောက်ရင် ပို၍အဆင်ပြေပါတယ်။ FDA approved ရထားတာ ကြောင့် ဘာမှစိုးရိမ်စရာ မရှိဘဲ စိတ်ချယုံကြည် စွာသောက်သုံးလို့ ရပါတယ်နော်။ အသက် အရွယ် အားဖြင့်လည်း အသက်၂၀ ဝန်းကျင်မှ အသက် ၇၀ ကျော်အထိ သောက်သုံးလို့ရပါတယ်။ ဆော်လမွန် ငါး၊ Lingzhi မှိုတို့နှင့် မတည့်သောသူများနှင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးများကိုတော့ သတိထား သောက်သုံးသင့်ကြောင်း ကြေငြာထားပါသည်။
ဈေးဘယ်လောက်လဲ။ ဘယ်မှာဝယ်လို့ ရလဲ။
အထုပ် (၃၀) ပါတစ်ဘူးကို ၄၀,၀၀၀ ကျပ် ပါ။ နယ်မှ လက်လီလက္ကားရောင်းချလိုသူများ အချိန်မရွေးဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ Collagen Zengo ကို KKB Co.Ltd မှ အဓိကထားပြီး ဖြန့်ချိနေတာကြောင့် ကမ်ဘန်ဂန်-ယူအိတ်ချ်စီ ၊ ကမ်ဘန်ဂန်-သုဝဏ္ဏ နှင့် ကမ်ဘန်ဂန်-မန္တလေးတို့ မှာဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါသည်။ Delivery နဲ့မှာယူချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဆေးဘူးဖိုးနှင့် Delivery ခကျသင့်ငွေပါပေးချေလျှင် အိမ်တိုင်ရာရောက် ပို့ဆောင်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
MySQL: 0.0004 s,0request(s), PHP: 0.0084 s, total: 0.0087 s, document retrieved from cache.